Global Voices teny Malagasy » “Afaka manampy manentana momba ny tolonay amin’ny maha-firenena sy vahoaka Mapuche ny fifandraisana” · Global Voices teny Malagasy » Print
“Afaka manampy manentana momba ny tolonay amin'ny maha-firenena sy vahoaka Mapuche ny fifandraisana”
Voadika ny 02 Jona 2018 8:47 GMT 1	 · Mpanoratra Alen Colipan Cid Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Alen Colipan Cid dia mpikambana ao amin'ny Witxalen,  fikambanan'ny tanora tompotany manandrateny amin'ny olana momba ny zaratany sy zon'ny tompotany ao atsimon'i Shily. Ity manaraka ity dia dika antsoratry ny lahatsary amin'ny famakafakan'i Alen momba ny zavon-tenin'ny voambolana“Mapuches ,” olona tompotany ao atsimon'i Shily sy Arzantina.
Ireo teny manjaka avy amin'ny lahatsoratra miisa 1985 navoaka teo anelanelan'ny volana Mey 2017 sy Mey 2018 ary nahitana ny teny “Mapuches ” tao anatin'ny angon'ny Media Cloud tamin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Espaniola tao Shily. (jereo akaiky kokoa ny sary )
Androany izahay iasa amin'ny zavon-teny manondro ny “Mapuches.” Raha ny hevitro, tsy ny teny mipoitra no tena zava-dehibe satria afaka mahita ny voambolana ‘comuneros (mponin'ny fiarahamonina),’ ‘fitokonana tsy hihinan-kanina,’ ‘governemanta,’ ‘ara-politika,’ ‘ady,’ ‘lalàna’ ‘fampihorohoroana,’ ‘hetsika,’ ‘Shiliana,’ sy ny ‘voampanga’ isika. Mino aho fa ny tena voambolana manondro ny vahoaka [Mapuche] dia singa hafa tahaka ny ‘kolontsaina,’ ‘Newen’,’ na tany, ‘ara-panahy,’ ‘ny fanahy,’ ‘fijery izao tontolo izao,’ ‘fiarahamonina,’ ary koa ‘fizakantena,’ sy ny ‘fiteny’ satria firenena izahay. Koa mino aho fa ny hevitra amin'ny zavon-teny dia izy azony aseho ny dikan'izany hoe Mapuche ary inona no tianay ho fantatry ny hafa momba anay amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Izay mahay anay tsy navilana dika, fa inona no tianay ho hitan'ny hafa aminay.
Fotoana tsara izao mba hanehoana ny tianay ho fantatry ny hafa momba anay amin'ny maha Vahoaka ary hampiseho ny fitakian'ny Firenenay amin'izao fotoana. Ity fomba fifandraisana ity no ahafahana manampy fanairana momba ny tanjonay sy ny tolona ara-drariny ataonay amin'ny maha Firenena sy vahoaka Mapuche.
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra Rising Frames novolavolaina tao anatin'ny hetsika nokarakarain'i Fernando Carías . Nanampy izy tamin'ny fikarakarana atrikasa natao ny 26 Mey 2018 tao Osorno, Shily izay nitondra hiaraka ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinika ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny tokony atao mba ho voasolotena amin'ny haino aman-jery Shiliana izy ireo ary hamorona tantara ho setrin'izany.
Nanatrika tamin'ny fandikana an-tsoratra sy ny dikanteny izay nahitsy hazava kokoa sy noho ny halavan'ny lahatsoratra i Mónica Bonilla.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/02/120412/